Godot Engine na-aga n'ihu na-enwe ọganihu na nkwado ya maka Vulkan | Site na Linux
Isaac | | Egwuregwu, Mmemme
Godot Engine bu ihe eserese nke anyi kwurula banyere ya na LxA. Ọ bụ ihe eji emeghe ihe eji egwu egwu nke n’iru n’iru n’usoro mmepe. Can nwere ike ịnweta koodu ya, budata ya, lee akụkọ na akwụkwọ, ma ọ bụ kpọtụrụ obodo ya na ibe ahụ Ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti Godot. Ugbu a, ị ga - ahụ na ụfọdụ nyocha banyere ọpụpụ ọdịnihu nke Godot 4.0 dị, ụdị ọhụụ nwere mmelite na-atọ ụtọ.
Egwuregwu egwuregwu FOSS a na-aga n'ihu na mmepe ma ha na-etinye nnukwu mbọ iji kwado ike Vulkan eserese API. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-arụ ọrụ na Godot Engine 3.2, nke a ga-ewepụta ma emesịa afọ a, ha nwere ụfọdụ atụmatụ na ọrụ a ga-etinye n'ọrụ na Godot Engine 4.0, dị ka disabling editọ ọrụ, pseudo 3D na 2D support, convex decomposition, usoro ohuru Ihe ntanetị gam akporo, mmelite ndị kachasị na nchịkọta akụkọ Visual Shader, na ndị ọzọ.
Onye isi mmepe Juan Linietsky, dere akụkọ ọhụụ ọhụụ. N'ime ya ị ga - ahụ na ha na - etinye naanị oge ha na nkwado egwuregwu vidiyo n'okpuru Vulkan. Ọ dị ka ọ na-etinye nnukwu mgbalị, mana ọ na-agba ọsọ ugbu a. Ọ dịla ka ọ na-arụ ọrụ, ya mere ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ụdị nsụgharị nke Godot n'ọdịnihu echere anyị. Anyị ga-ege ntị na akụkọ ọdịnihu.
N’ile anya na Vulkan 2D, odi ka odi ka okara ma ga-ebido na 3D na ngwụcha ọnwa a. Ebumnuche bụ ka atụmatụ ndị bụ isi nọrọ na Godot 3.x site na Ọktọba, mana nke ahụ pụtara itinye ọtụtụ ọrụ ike n'oge okpomọkụ a. Ezigbo ozi ọma maka ndị mmepe egwuregwu niile na-eche maka iji Godot maka aha ha. Ga site na OpenGL ruo Vulkan bụ nnukwu mgbanwe dị mma maka ndị egwuregwu ga-ahụ nsonaazụ kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Godot Engine na-aga n'ihu na-enwe ọganihu na nkwado ya maka Vulkan
Uhie okpu na-ezube ịkwụsị mmepe nke ihe nkesa X.Org